5 Day Njem Site Rome Iji Explore Italy | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Day Njem Site Rome Iji Explore Italy
Rome bụ a ọmarịcha obodo, ma mgbe ụfọdụ, a njem achọsi a bit nke dịgasị iche iche. Ndị anọ Rome ogologo oge iji inyocha ọ pụrụ iche nwere anya gburugburu ebe, oke. Ọ dabara nke ọma, na ọ bụ ihe ụbọchị njem bụ maka! Ịtụle otú ọma ejikọrọ Rome bụ ụgbọ okporo ígwè na-n'ọtụtụ ebe, nnukwu ihe ịma aka na-ahọrọ ebe aga. Otú ọ dị, anyị kwadebere a ndepụta na-enyere gị na-eme nnọọ nke ahụ. ebe a na- 5 Day Njem Site Rome Iji Nyochaa Italy na ọ bụla njem ga-enwe!
1. A Day Njem Iji Ostia Antica
Ostia Antica bụ oge ochie mmezi gburugburu 30km n'ebe Rome. Back n'ụbọchị n'oge ochie, obodo a bụ isi n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Rome na e nwere ọtụtụ na-ahụ ebe a. Dị ka ọmụmaatụ, you can take a look at the public baths with beautiful mosaics.
Ọzọkwa, e nwekwara ndị na ọgbọ egwuregwu na isi n'okporo ámá. Mkpọmkpọ ebe ebu foduru nke a ole na ole dị ịrịba ama n'ụlọ nsọ, dị ka nke onye raara nye Hercules.
Ọzọ Day Njem si Rome na anyị na-atụ aro bụ Tivoli, ndị ọkacha mmasị obodo ụzọ mgbapụ nke Eze Ukwu Rom Hadrian na narị afọ nke abụọ AD. o wuru Hadrians Villa na nke a mara mma obodo dị ha nso, nke o biri Ekwughị karịa ya biri na Rome.
Dị ka ndị kacha ntụrụndụ ebe, Hadrians Villa na Tivoli nwere ubi, ọba akwụkwọ, na ya mechara ghọọ a obodo ya. Obí eze na ụlọ arụsị na-na-akpali akpali nke tour, nke ga-eme ka gị na ụbọchị njem Tivoli kwesịrị ya.
Rome ka Tivoli Ụgbọ oloko
Tivoli ka Rome Ụgbọ oloko
Perugia ka Tivoli Ụgbọ oloko
Orvieto ka Tivoli Ụgbọ oloko
3. Day Njem Site Rome Iji Bracciano
Iwuli elu kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè mgbe otu hour ogologo na-agba ịnyịnya si Rome, na ị ga-rutere Bracciano. Nke a ọmarịcha ochie obodo dị n'ikperé Bracciano Lake nwere ọtụtụ nlegharị anya na-enye. Ọmụmaatụ, i nwere ike ịgagharị na Orsini Odesalchi Castle, which was a residence of many nobles.
Gịnị ọzọ, a nnukwu mansion bụkwa ebe Katie Holmes di Tom irughari na 2006. Ọzọkwa, i nwere ike ịgagharị Braccianos katidral, nke e wuru n'oge ochie ụfọdụ.
Rome ka Bracciano Ụgbọ oloko
Bracciano ka Rome Ụgbọ oloko
Bracciano ka Manziana Ụgbọ oloko
Santa Marinella ka Bracciano Ụgbọ oloko
Dị ka a obodo nke bukwanu akụkọ ihe mere eme uru, Naples bụ a ga-eleta onye ọ bụla na-achọ na-enweta Italy ma na-a Day Njem si Rome. Echiche nke Ugwu Vesuvius gbawara, ebube ije, na-ekpo ọkụ, enyi na enyi obodo ụfọdụ n'ime ndị isi atụmatụ nke obodo. Otú ọ dị, Naples bụkwa ma ama dị ka ndị omumu nke Pizza Margherita. Ihe ọzọ bụ na, ị nwere ike ịga na ụlọ pizza ebe ha mere nke mbụ Pizza - Antica ahụ ụlọ pizza PortAlba.
Milan na Naples Ụgbọ oloko
Florence na Naples Ụgbọ oloko
Venice na Naples Ụgbọ oloko
Pisa na Naples Ụgbọ oloko
Ikpeazụ anyị aro maka Day Njem si Rome bụ Florence, nke nwere ike iyi ka a bit anya nke ukwuu a ụbọchị njem. Otú ọ dị, ọ bụ mfe na ngwa ngwa inweta site na ụgbọ okporo ígwè. na dị nnọọ ebe ahụ mere ihe akụkọ, architecturally enchanting center nke Florence ga-eme ka njem kwesịrị ya. Duomo di Firence bụ ama ama Florence katidral, nke zuru okè na-ewepụtakarị ochie anya nke obodo. Eleta Florence na a ụbọchị njem si Rome bụ a oké ụzọ kechie gị ezumike.
All nke ebe ndị a nso Rome dị oké ọnụ ahịa na-eleta. Ọ bụrụ na ị na-achọ a zuru okè ụbọchị njem, bulie ọkacha mmasị gị na-aga. Ọ bụ na mfe!
Bari na Florence Ụgbọ oloko
Salerno na Florence Ụgbọ oloko
Njikere maka gị Italian njem? Mkpọ akpa gị, Akpara gị ezumike eme, na AKWỤKWỌ gị Train Tickets n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Day Njem Site Rome Iji Explore Italy” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Daytrips njegharị travelitaly travelrome traveltips